Akwukwo nso, ihe nlere ma obu ibu okwu nke ndi Sumer? - AFRIKHEPRI
Du Latin apocalypsis (mkpughe), n’onwe ya gbaziri site na apokalupsis Greek oge ochie (chọpụtara), na-esite n’okwu ngwaa Grik kalupto (izochi) bu ụzọ nweta nkwụghachi ịnapụ mgbaghara. N'ụzọ nkịtị, "anaghị ezobe", yabụ site na extrapolation, "ekpughere anya", "iwepụ ákwà mkpuchi", "mkpuchi ahụ na-ewuli elu".
Ebe ọ bụ na translation mbadamba ụrọ nke Mesopotamia na-amụ Bible odide, ọ na-egosi na ọtụtụ ngosipụta nke Old Testament na-egosi na mbadamba e dere cuneiform. Dị ka Bible mmiri ahu nke na-enwe na Babilọn version nke iju mmiri dị na n'ọbá akwụkwọ nke eze Asiria Ashurbanipal na Nineveh sụgharịa ma bipụtara Smith Goerges, ma ọ bụ ndị e dere na Epic of Gilgameš (Babilọn version dere iri na asatọ ma ọ bụ iri na asaa na narị afọ BC.), ihe e kere eke (Enuma Elish The Epic), ihe e kere eke nke mmadụ nke ụrọ, ihe nzuzo nke anwụghị anwụ ...
Nchịkọta nke mbadamba nkume Sumer, banyere 2500 av. JC
Ọ bụ nke a continuity nke ga-dabara na shelves nke Sumer àjà a ọhụrụ anya nke nmalite Jenesis. E nwere ọtụtụ mgbalị nsụgharị, ma ihe kasị mkpa nke niile bụ na nke na-eme nchọpụta sumérologie, Anton Parks. N'akwụkwọ ya n'Iden (2011, mbipụta New Earth), mgbe ịdabere na-arụ ọrụ nke ya ụzọ (Samuel Noah Kramer, Jean Bottero, Georges Contenau, ...), ọ na-enye a translation na-adọta a tụnyere chaatị na ihe anyị na-ahụ na Jerusalem Bible.
The annotated mbadamba CBS 14005, 8383 CBS na-ikwu na mbụ eze nke Sumer, ma ọ bụ ọ dịghị ihe ọzọ 2800 BC. BC na BM 74329 tinyere a mmeputakwa nke ederede ikodu ke Babylon n'oge ndọrọ n'agha nke ndi-Hibru, ma ọ bụ ọ dịghị ihe ọzọ 597 BC Ha bụ ihe onwunwe nke British Museum.
CBS 14005, n'ihu, ahịrị 21: "Enlil na chi emepụtala ndị mmadụ...ha gba ọtọ: enweghị uwe e zubere maka ha "
Gn 2: 25: " nwoke na nwanyi e kere site Chineke sont gba ọtọ »
CBS 14005, n'akụkụ b, 24 ahịrị: "Anyị, chianyị gbanwere ya, anyị nwere ya zọputa... o wee sị na iguzo na ụrọ »
Gn 2: 7: " Chineke mere ihe nwoke ahụ ụrọ ala na mmadụ ghọrọ onye dị ndụ »
CBS 14005, n'akụkụ b, 21 ahịrị: " Ogwu si ogige ...nwoke ndị mba ọzọ aha ya bụ ma gua ha otutu "
Gn 2: 20: " nwoke enye aha onye obula anụ ụlọ, anu ufe nke elu-igwe na anumanu nile "
CBS 14005, n'akụkụ b, 29 ahịrị: "Ha bụ deux. N'ebe ọ bụla, nwoke mere mkpọtụ. ya nwunye rụrụ ọrụ ya dị elu buru nri. Ewoo, o sooro ya »
Gn 2: 25 na 3: 6: " nwoke na nwaanyị sont deux. Nwanyị ahụ soro nwoke ahụ nọ n'ubi. Nwanyị ahụ na-aga bulie mkpụrụ ahụ a machibidoro iwu "... (EDEN, p.143)
CBS 8383-a, kọlụm 2: "N'oge ahụ, nwoke ahụ emeghị ihe ọ bụla ".
Gn 2: 5: "... E nweghị enweghị onye ọ bụla ịzụlite ala "(EDEN, p.110)
BM 74329: " Ọgbọ 7 de chi, Usoro 7 na-agba ọsọ tupu ọbịbịa nke chi An (u) na ya Anunna »
Gn 1: 1 ka 2: 3: "na Ụbọchị 7 nke okike nke Chineke tupu ọbịbịa nke YHW et SES mmụọ ozi (EDEN, 65)
Ihe mgbaru ọsọ ebe a abụghị iji gosipụta ihe niile merenụ kama iji gosi na ọtụtụ puku afọ tupu mmalite ederede Agba Ochie na Agba Ọhụụ, akụkọ dị nnọọ ka nke Jenesis dịrịrịrị a na-edekwa ya na mbadamba ụrọ. Ụfọdụ nwere ike ịsị na nke a abụghị ihe ijuanya ebe ọ bụ na okwu Chineke dị ọtụtụ na ngosipụta ya, ya mere, anyị ga-ahụ ebe ahụ, ndị mbụ na-emechi ihe ga-abụ Bible mgbe e mesịrị. Ya mere na "Chineke" nke choro ikpochapu ihe omuma nke akwukwo nso iji gbasaa ya karia ime ka o kpezie site na ndi madu "sitere n'ike obi" ka ha weghachite okwu ya n'olu. Nye ndị ahụ, anyị nwere ike ịza, ee, gịnị kpatara ya.
O bu ihe nwute, uzo a abughi ihe di mfe, n'ezie, ndi nerube isi choputara na ebe Baibul na-ekwu maka "Chineke" ndi Sumeria na-ezo aka chi, dika o bu omenala iji gosiputa ihe biara site n'oge gara aga dịka akara nke amaghị ihe, onye nwere ike ikwubi na ndị Sumer anọghị na-atụ egwu nkọwa nke Chineke. Ma nke a dị ọtụtụ ebe ọtụtụ ndị na-echeghị ya, n'asụsụ Hebrew nke Agba Ochie.
E 14 isi French Bible agụ, 12 ekweta na iji okwu "Chineke," ebe ndị ọzọ 2 (translation site Dhorme na Chouraqui) me ka aha-eji na ihe odide Hibru "Elohim". Gold Elohim abụghị Chineke maka ihe 3.
1 - Okwu ahụ bụ "Chineke" sitere na Latin Deus, n'onwe ya sitere na Indo-European root dei "na-enwu gbaa" nke a na-eji akọwa eluigwe na-enwu gbaa, ìhè anyanwụ. Ihe odide ya pụtara nanị mgbe ọ na-ejikọta ya na chi Grik bụ Zeus na-akpọ ZE-OUS na onye ọ bụ Dios. Ọ ga-apụta n'asụsụ French na narị afọ nke iri na itoolu. N'ihi ya, ọ bụ onye na-anụ akwụkwọ na ọkwa asụsụ.
2 - Elohim bu otutu, n'ezie n'asusu Hibru ihe omimi "im" bu ihe di iche. Chineke bụ ọtụtụ nke Eloha nke EL na-eme ka ọ dị mfe.
Kedu ihe Larousse Dictionary (mbipụta 1965) na-agwa anyị: "Elohim, Hebrew (...) plural of El or Eloha ..." Na Larousse Online Dictionary 2012:
"Elohim: Plural nke Eloha, nke putara" Chineke ".
A ga-ahụ na ihe ndị e kwuru okwu banyere okwu ahụ bụ Chineke na nkọwa nke abụọ. Ụzọ ị ga-esi kwuo ya, ị ga-eji ya na ndị na-ekpo ọkụ.
3 - Ebe ọ bụ na a kwenyere na ọ bụ n'asụsụ Hibru ka e dere akụkụ nke Agba Ochie nke Akwụkwọ Nsọ. Ọ dị mkpa iburu n'uche iwu ụfọdụ, n'ezie iji sụgharịa ya n'asụsụ Hibru, ọ bụghị ịsụgharị site na Bekee, ọbụlagodi obere ma a bịa n'ihe odide dị nsọ nke Chineke n'onwe ya kwuru. Tanakh nke choputara Hibru Hibru bu ihe di iche iche, nke dika iwu nke Gematria nyere okwu obula ibu ihe bu isi iji dozie ihe odide.
Kedu ihe gematria?
Ọ bụ iwu nke na-ejikọta ọnụ ọgụgụ ya na akwụkwọ ozi, nke mere na n'asụsụ Hibru, uru gematric nke okwu nna ahụ bụ 3 na nke nne nne na-asụ 41, ọnụ ọgụgụ 44 kwekọrọ na uru nwa okwu ahụ.
Ya mere, iji dochie anya okwu bụ Elohim nke nwere okwu dị iche iche nke na-enweghị mmekọrịta mmekọrịta ọhụụ na njedebe mgbe mmadụ maara ihe dị mkpa, bụ iji mee ka a mara ihe megide akụkọ na-ekwu na ọ dị nsọ.
Ekwesiri imata na na Sumerian, ADAM pụtara "Animals, animals", EDEN, "azụ nke ugwu", na-ezo aka na ndagwurugwu nke ADAM ga-arụ ọrụ maka chi ndị Sumer.
Gn 2: 15 "Jehova Chineke wee kpọrọ nwoke ahụ tinye ya n'ubi Iden Iden iji zụlite ya ma lekọta ya" (New World)
A na - akpọrọkwa mmadụ n'ime Bible ka ọ rụọ ọrụ n'ubi Iden nke Iden, n'eziokwu ọ dị adị nanị n'ihi na ọ dịghị onye ga - azụlite ụwa dị ka akụkụ Akwụkwọ Nsọ a si kwuo:
Gn 2: 5 "... Jehova Chineke etinyeghị mmiri ozuzo n'elu ala, ọ dịghịkwa ndị ọ bụla ga-azụ ala" (New World)
Rịba ama na n'asụsụ Hibru bụ Ogige, ọ dị nnọọ mkpa ịsụgharị okwu Hibru Hibru bụ Ogige Iden.
Ọ bụrụ na otu na-elekwasị anya etymology nke okwu paradise na-abịa site Latin paradisus, si Greek paradeisos bu n'uche mgbe ya mbinye ego si Persian pardez "ihe nchọ park ebe anụ ọhịa na-," nakwa na e nwere ịgbakwunye na nsụgharị nke ụfọdụ Bible kwuru nkuzi mgbamejije na Sumerian gụnyere imewe nke Iden Sumerian.
EDEN EDEN "Ala nke azụ ugwu", ọ na-adọrọ mmasị ịhụ na n'asụsụ Hibru GAN EDEN pụtara "ubi ụtọ".
Eziokwu ọzọ na-enye nsogbu ma ọbụlagodi na Akwụkwọ Nsọ na-agwa anyị, site na Gn 1: 27 "Chineke wee kee mmadụ n'oyiyi Ya, n'onyinyo Chineke ka O kere ya: nwoke na nwanyị ka O kere ha" ( Ụwa Ọhụrụ), na nwoke na nwanyị dị adị tupu Gn 2: 7. Ka Adam na-enye anyị echiche sitere na Akwụkwọ Nsọ dịka nwoke mbụ, Sumer weghachite ákwà mkpuchi ọzọ:
BM 74329: "Ọgbọ nke 7 nke chi, ihe okike 7 na-aga n'ihu n'ihu chi An (u) na Anunna"
Dị ka nsụgharị nke mbadamba ahụ na-egosi, ụbọchị Akwụkwọ Nsọ 7 nke Akwụkwọ Nsọ n'etiti ndị Sumer kwekọrọ n'ọgbọ dị iche iche, n'oge nke ọ bụla, e wetara ihe ọzọ maka okike. Maka ndị Sumer, ọ bụ An site na nwa ya nwoke bụ Enlil bụ onye kere EDEN, ma ọ bụghị ndị ikom mbụ bụ ndị na-amazi ala ahụ mgbe ọ bịarutere. Ọ bụ ihe na-adọrọ mmasị ịhụ na na New World translation aha Jehova pụtara na nke mbụ mgbe ụbọchị 7th gasịrị. Nkọwa nke ndị nsụgharị?
Agbanyeghị, nyere ndị na-egosi n'ihu, Bible Genesis eburu ísì plagiarism (ọzọ), na-kasị mma ghaara ya ụgha na ike na-enye anyị na Bible na nnọchi nke okwu Chineke, a otutu site na otu aha di iche nke ndi nnochite anya Chineke adigh aka na uzo obula.
Ihe ncheta nke pyramid na ebe nchekwa nke Charles T. Russell, onye guzobere WatchTower Bible na Tract Society (Ndịàmà Jehova). O nwere ihe nnọchianya ndị dị na Masonic Rite nke York, nke a na - akpọzi Rite Standard Webb, nke a na - emekarị site na North America mgbe niile. Agbanyeghi na ihe nnochi di iche iche nke WatchTower amachibidoro.
Gịnị mere na ọtụtụ ndị anụtụbeghị banyere nke a ka a marala ihe dị n'ime mbadamba nkume Sumerian ruo nwa oge ugbu a?
N'ihi na n'oge mbụ, ọ bụ nanị Ndị Kraịst ole na ole nara nsogbu ahụ iji lelee isi akwụkwọ nke Akwụkwọ Nsọ ha. The okwukwe dabeere na ihe omume nke okwukwe na-emegide n'ụzọ ụfọdụ pụrụ iche echiche na-ajụ ajụjụ, ọ bụghị n'onwe ya ihe ijuanya, ọ bụ na-ekwesịghị ekwesị na-akpọ n'ime ajụjụ ụfọdụ na nke Baibul ma nakwere ndi ozo ebe obu na edere Baibul dum dika ihe ngbochi nke bu okwu Chineke. Ọ bụrụ na anyị ekweta na otu akara bụ ụgha, anyị na-ajụ ajụjụ niile. Ọ bụkwa ebe a na ngwakọta ọhụrụ Christian alaka pụta Century 19e (Mormon, Onyeàmà Jehova, wdg ...), ha na-ekwupụta na onye ọ bụla dị ka erute ezi Bible ozi na-ewebata ha Bible translation na a nkuzi nke dabeere na Bible ọhụrụ a. -Apụghị izere ezere, ndị na-aghaghị chọta anọgidesi ebe Bible na-ahaziri, ọ dị mfe ka hà so na-nri, nke ọzọ na-ezighị ezi ...
Ekwesiri ighota na ndi isi Christian investors bu ndi choro ihe omumu ihe omumu ihe ndi ozo bu ndi choro ka ha juo oru nke oru ha. na-eje ije na ntụziaka a na-enye ha iwu, ọ bụ "Onye Kraịst", mkpa a maka ijikwa ozi na ihe ọmụma, ma na-ele ihe mgbagwoju anya na isi ndị ọzọ pụta ìhè, anyị ghọtara ihe kpatara ya. N'ezie, nke a bụ otú nchọpụta si arụ ọrụ mgbe nile, ndị na-etinye ego na-emechi ndị na-emegide nghọta ha ma nye ndị na-akwado ọhụụ ha, na akụkọ ihe mere eme akụkọ ọhụrụ bụ nke ụwa. Pharaohon Egypt.
N'ezie, ebe mbụ Napoleonic njem ndị mmadụ merela (1798) na-amụ ihe àmà nke Greek dịkọrọ ndụ, ọ na-maara dị ka onye J.Randall Pharaonic Ijipt ruo mgbe Ptolemaic usoro ndị eze bụ nke Negro African ụmụ, ma N'oge ugbu a, anyị na-aga n'ihu ịhụ ihe nnọchiteanya nke Fero ma ọ bụ ndị ọzọ na-ahụ tupu oge Ptolemic na-anọchite anya atụmatụ ndị Semitic. Ọ dị mfe itinye onwe gị na oge nke ịghọta oge ọdachi ndị dị. Were ya na Napoleon na ndị ọrụ ibe ya na-achọpụta na agbụrụ a na-ede aha bụ ntọala nke mmepeanya nke ndị ọkà mmụta Gris mbụ dị ka Pythagoras na ndị ọzọ na-aghọta na ha mere klas ha? Eziokwu ka mechie. Ma ihe ịma aka nke Ijipt na-aga n'ihu karịa nkọwa a dị mfe nke akụkọ ihe mere eme.
Egypt nke Ijipt bu ihe ngbawa nke ndi Hibru ndi no na Baibul, ndi tara ohu ohu di egwu ma duga n'ala ala ekwere site na ndi amuma nke Chineke, obu ihe ojoo, ajuju Baibul. Tupu ọbụna Egyptologists na nso nso nwere monopole nke ọmụmụ nke Ijipt saịtị, na-enye na obi ha na ha nwere ike tulee ụdị nile nke echiche dabeere na akụkụ na Bible, ndị a kwubiri nọ ọ bụ Ndị Hibru, ohu nke ndị Fero, bụ ndị wuru Pyramid ukwu, iji kwado echiche ha, ha enweghi okwu, okwu a na-akpọ ndị ohu, okwu na ruo taa ha apụghị ịchọta na nke ahụ ọ bụghị n'ihi enweghị ịkwado ya. N'ezie, nke bụ eziokwu bụ nnọọ iche, ebe ọ bụ na ndị ọkà mmụta sayensị na ihe ọ bụla ubi-amụ ubi, ha otu olu na otu mgbe, na Great pyramid na ụfọdụ oké ncheta nke ndị dị otú ahụ a oru feat na ọ bụrụ na anyị chọrọ iji weghachite otu ihe kwesiri ya na ihe di iche iche nke taa, anyi ga acho acho ihe ndi ozo kachasi anya n'uwa obula na nke a n'emeghi ihe o mere. N'ụzọ doro anya, ọ na-esiri nnọọ ike ịhụ na ọrụ ncheta nke ọrụ ndị nwoke na ndị inyom, nke ahụ ga-ekwu na iji tụnyere ụrọ nke NASA bụ ndị ohu. Ihe ga-abụ ihe nzuzu ma ọbụna taa bụ olu ndị ọkà mmụta okpukpe na-anọgide na-anụ.
Ihe niile a mere?
Site n'ọtụtụ ihe, ọ bịara doo anya na e nwere ozi na ọsọ ọsọ abụọ, ọ bụghị ikwu atọ, n'oge ego ego na-eme ka ego bụrụ isi ya, nke ahụ bụ ikwu ozi, nke ikpeazụ nke dị mkpa maka ọha mmadụ ọ bụla chọrọ ịnwụgide, dịka nchọpụta ahụ na-egosi, usoro ntinye ederede ya dị iche iche iji chebe ma chekwaa ozi ha, enwebeghị ike ịnweta ya.
Taa, intaneti agbawaala ihe ọmụma nke ndị a na-akpọ obodo nke oge a na-achọsi ike iji nọgide na-eme ihe. Enwere ike ịmata ebe, ebe, ndị mmadụ na-enweghị ihe ọ bụla na-agagharị, ọ bụrụ na anyị maara otú e si eji ngwá ọrụ a bụ ịntanetị enwere ike iwepụ ihe ọmụma dị mma n'onwe ya. N'ihi ya, amaghị ihe abụghịzi nhọrọ nke ndabara nke onye ọ bụla, mana nhọrọ nke aka ya. Ozugbo anyị lụrụ agha maka ebube ya, ala ya, ugbu a ọ bụ karịa agha nile nke ozi nke na-eme ka ndị na-amaghị na abysses nke ndụ anyị dị n'ụwa.
Predation usoro nke ụwa na-adara kemgbe 2 millennia kpatara ọnwụ nke ọtụtụ ndị, ukwuu na-ata ahụhụ n'ihi na ugbu a nweta ihe ultra-egalitarian ụwa. Ọ ghaghị ịkwụsị na ọ dịịrị onye ọ bụla n'ime anyị ime ya n'ụzọ nke aka anyị, amalitere m na Bible, n'ihi na n'uche m Kraịst mgbe ọ bụ Iwu nke Milan na 313, bụ onye kpọsara nnukwu okpukpe a okpukpe nke alaeze Ukwu Rom, nke propelled Europe n'oge nke amaghị na esemokwu na-akpọghị aha, na-ebibi dum isi nke oge ochie ọha mmadụ bi n'ebe ahụ, bụ site na popu nke 1454 nyere ikike eze Portugal, Alfonso V, ikike ohu Africa na Amerika, na-eme ka ọnwụ nke ọtụtụ nde ndị mmadụ, na mgbe nile na oge nke amalite ịchị mgbe European ụlọ ọrụ kpebiri iwere anya na Church site na ọtụtụ iwu e tiri, nke ahụ bụ mgbe ha kpebiri na Berlin ogbako nke malitere na 1885, ọ ga-adị mma Christianize dum sub-Saharan Africa na-ebibi dum isi s African ọha mmadụ na-ama ebelatawo site 13 Centuries of ohu na castration Arab-Muslim na Western 5 Centuries ndị ohu n'okpuru cover Christian, olulu Afrika na steeti, ọ bụ taa, ọ bụ paradoxical iji mara na Black Africa adịghị njọ otú ahụ mgbe ọnụ ọgụgụ nke ndị Kraịst nọ n'ala ya ruru ọtụtụ akụkọ ihe mere eme.
Ọ bụkwa oge maka kọntinent a ịnakwere ileba anya n'eziokwu ahụ, ọ bụrụ na onye isi obodo na onye Europe na-eri "onyinye" nke Akwụkwọ Nsọ na Black Africa ọ ghaghị ijere ya ozi ma ọ bụ n'ihi o kwenyesiri ike na uru akwụkwọ a bara, iji kwenye na ya, otu nwere ike lee okwu Leopold nke Abụọ, eze Belgian nke oge ọchịchị. Ọ ga-abụkwa ihe na-eme ka nwa Afrịka na-eme ka à ga-asị na ọ dị mma karịa Europe karịa ntọala nke akwụkwọ nke e nyere ya iwu site na igbu ọchụ, ndina n'ike na nrubeisi nke nne na nna ha ochie.
Ogologo oge na-aga, ka egosipụtakwa eziokwu ndị dị na kọntinent a ma gosipụtara, ọ bụ ugbu a ka Afrika a ga-ahọrọ ma ichere maka nzọpụta nke Akwụkwọ Nsọ ma si otú ahụ nabata usoro iwu nke usoro ihe a nke oge, mgbe ahụ ị ga - eji obi ike ya niile jiri anya ya hụ anya ya n'akụkọ ihe mere eme, iji kpoo ya iji kpochapụ ihe ndị e ji mara nke a na - etinye ya n'ọgbọ oge na - enye ya echiche nke ịbụ mgbe nile n'agbụrụ maka mmepeanya.
Ọ adịghị banyere na tụfuo a colonial ketara erikpu igbachi onwe-ha na a kpuru ìsì traditionalism ma cheekwa ozo anyị akụkọ ihe mere eme ime mmụọ isi, weghachi ya furu efu mkpa, nke mysticism na-ahụ na nke a Science ndị nna ochie gosipụtara na ọchịchọ siri ike na-ebipụta ọnụ ọgụgụ Eziokwu-Order-Harmony cristallized na Mâat.
Dị ka ndị America America, n'oge mgbukpọ ha nke Amerịka mepụtara, onye kwụsịrị ịdọ aka ná ntị onye ha kpọrọ "onye ọcha ahụ" n'àgwà ya banyere gburugburu ebe obibi, ihe o siri ike ka ọ dị taa, Africa nwere ọtụtụ ihe ichetara ụwa.
Anton Parks, "Eden", 2011, New Earth Editions Samuel Noah Kramer, "Amalite Akụkọ ahụ na Sumer", 1993, Flammarion
Cheikh Anta Diop, "Mba, Negroes na Culture", 1954, Ebe Ndị Africa
Cheikh Anta Diop, "Civilization or Barbary", 2001, Ebe Ọwụwa Anyanwụ Afrịka Assani Fassassi, "Mmehie nke Ewu megide Africa", 2004, Al Qalam
Jacques Grimault, "Mkpughe nke Pyramid" Ụwa Ọhụrụ, "Akwụkwọ Nsọ", Nsụgharị nke 1995, Bible Bible
0,52€ dị na ngwaahịa
3 ọhụrụ site na 3,55 €
Ejiri 14 € 0,52 mee ihe
dị ka Mee 24, 2020 11:30
Ụbọchị mwepụta 2009-10-02T00:00:01Z
Publication Ụbọchị 2009-10-02T00:00:01Z
Ònye bụ Chineke, na Morgan Freeman (Video)
Aha Chineke n'Africa